Daandiin Xayyaara Itoophiyaa tarree daandii xayyaara amanamoo addunyaa keessa seene - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Daandiin Xayyaara Itoophiyaa tarree daandii xayyaara amanamoo addunyaa keessa seene
Daandiin Xayyaara Itoophiyaa tarree daandii xayyaara amanamoo addunyaa keessa seene
Daandiin Xayyaara Itoophiyaa sadarkaa 6ffaa irra kan jiru
Daandii xayyaaraa dhimma geejjibaan wolqabatee shorri inni taphatu kan bakki guddaan laatamuufiidha. Keesumaattuu dafanii namas ta’ee meeshaa bakka tokkoo gara bakka biraa geessuuf kan akka xayyaaraa dafee nama furu hinjiru. Daandii xayyaaraa hundi, ta’us garuu, tajaajila maamiloota isaaniif bifa wolfakkaatuun laataa jiru jechuun hindanda’amu.Daandii xayyaaraa dafee biyya tokkoo biyya biroo nama geessu akkuma jiru inni buufata xayyaaraatti sa’aa dheeraaf ykn guyyaa murtaayeef imaltoota hidhamtoota godhus jiru; waa’ee balaa xayyaraa osoo hindaganne jechuudha.
Dhimmuma tajaajila gaarii laatuu irratti dhaabbanni Wander Bat qorannoo geggeessee ture. Qorannoon kunis kan ifatti mirkaneesse daandilee xayyaraa jidduu addaaddummaan, tajaajila isaan laataniifi dhimmoota biraatiinis wolqabatee, akka jiruudha kan mirkaneesse. Qorannnoon kuni daandii xayyaarota heddu wolbira qabee ilaaluun sadarkaa baaseefii jira. Sadarkaa kana basuuf qabxiileen ijoon Wander Bat xiyyeeffannaa guddaa laateef sadi: sa’aan balali’uu danda’uu, gatii imaltoonni meeshaa isaniif kafalaniifi umrii xayyaarota tajaajila laataa jiraniiti. Qabxiin sadiinuu amanamiinsa daandii xayyara tokkoof baay’ee murtessoodha, akka Wander Batitti.
Bu’aan qorannoo kanaa kan hedduu nama raajuudha. Sababni isaas daandiin xayyaara biyyoota bebbeekamoo hedduu madaallii Wander Bat kanaan sadarkaa ol’aanaa irra jiraachuu dhabuu isaaniiti. Daandii xayyaara amanamoo jedhee dhaabbanni Wander Bat 10 tarresse keessa daandiin xayyaaraa 7 kanniin ardii Aasiyaa irraa ta’aniidha. Daandiin Xayyaara Itoophiyaa sadarkaa 6ffaa irra kan jiru; kunis nama heddu ajaa’ibsiisuu hinoolle. Ardii Afrikaatii daandiin xayyaaraa sadarkaa keessa seene inni biroo Egypt Air dha. Innis sadarkaa 14ffaa irra kan jiru. Hundarra kan nama ajaa’ibsiise daandiin xayyaarota Ameerikaafi Awurooppaa tarree kana keessaa guutummatti jechuun bifa danda’amuun, British Airways n alatti, dhabamuu isaaniiti.
Sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa kan kufe harka daandii xayyaarota biyoota Arabaati. Umriin Xayyaarota isaaniis injifannoo argatan kanaaf tarii gummaacha guddaa qabaachuu hinoolle. Kunis hedduun isaani gara tajaajilaatti kan seenan as dhihoo kana waan ta’eef. Akka fakkenyaatto Qatar Airways, inni tokkoffaa ta’e kuni, tajaajila kennuu kan eegale bara 1993. Kana jechuun hedduun xayyaarra isaanii naannoo umrii woggaa 20 qabu jechuudha.
Tarreen sadarkaa akka wolduraa duubaatiin kana fakkaata:
Gahumsa (destination): 144+
Gahumsa (destination): 142+
Gahumsa (destination): 300+
Gahumsa (destination): 62+
Gahumsa (destination): 207+
Gahumsa (destination): 101+
Gahumsa (destination): 185+
Gahumsa (destination): 183+
Gahumsa (destination): 126+
10. Cathay Pacific (Hong Kong)
Gahumsa (destination): 112+
11. LAN (Chile)
Gahumsa (destination): 66+
12. Tam Airlines (Brazil)
Gahumsa (destination): 92+
14. Egypt Air
Gahumsa (destination): 78+
15. Etihad Airways (UAE)
Gahumsa (destination): 120+
daandii xayyaara itoophiyaa
sadarkaa daandii xayyaarotaa
Previous articleAbarraa Kumaa maratoonii Rootardaam injifate
Next articleJaalalli dhugaa qabxiilee 10 kanniin ufkeessatti ammata